Aragtida 2018 ee warshadaha safarka raaxada ah ee ay xoojiso dhaqaalaha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Dalxiiska » Aragtida 2018 ee warshadaha safarka raaxada ah ee ay xoojiso dhaqaalaha
Airlines • Airport • Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • saaciday inay • Warshadaha Warshadaha • Wararka Raaxada • News • Dadka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Shirkadaha ugu sareeya ee maaraynta safarka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey sahanka 2018, inkasta oo ay jiraan dabaylo ka imanaya argagixisada iyo caqabado kale.
Dhaqaale xoog leh iyo rabitaan ah in la waayo -aragnimo adduunku waxay u horseedi doontaa koboc dheeri ah qaybta socdaalka raaxada ee Mareykanka sannadka 2018, sida lagu sheegay sahan cusub oo lagu sameeyay shirkadaha maareynta socdaalka ee ugu sarreeya. Sahankan, oo la sameeyay bishii Diseembar 2017, wuxuu ka tarjumayaa xitaa kalsooni ka badan warshadaha marka loo eego sannadkii hore, in kasta oo ay jiraan caqabado warshadeed sida argagixisada, duufaannada, iyo fayraska Zika.
"Dadka safarka ah ee aadka u sarreeya waxay dareemayaan waxyeello xagga dhaqaalaha ah, taas oo horseedi doonta sannad kale oo banner ah oo loogu talagalay dalxiiska raaxada ee 2018," ayuu yiri Peter J. Bates, oo ah madaxweynaha shirkadda samaysay sahanka. "Waxay go'aansadeen inay arkaan adduunka oo ay u muuqdaan inay gilgilayaan walaacyada ku saabsan kacdoonnada siyaasadeed iyo masiibooyinka dabiiciga ah."
Sahankan sannadkan, 37% la -taliyayaasha ayaa sheegay in macaamiishoodu ay dareensan yihiin taxaddar ku saabsan safarka caalamiga ah, oo hoos uga dhacay 47% sannadkii hore. Sideed boqolkiiba ayaa sheegay in macaamiishu ay dib u dhigayaan go'aamada ku saabsan safarada caalamiga ah, iyo 18% sannadkii hore. Taasi waxay tidhi, boqolkiiba toddoba la -taliyayaal ayaa sheegay in macaamiishu ay baajiyeen qorshayaashii socdaalka ee caalamiga ahaa sannadkan, halka ay ka ahaayeen 4% keliya sahankii 2017 -kii.
Intaa waxaa dheer, 87% jawaabeyaasha ayaa saadaaliyay kororka dakhliga sanadkan. Kobaca waxaa inta badan horseed u ah kororka safarka firaaqada (oo 84%ay saadaalinayaan koror), iyo sidoo kale shirarka iyo dhiirrigelinta (61%) iyo safarka shirkadaha (57%). Intaa waxaa dheer, 66% waxay arkeen ganacsigooda markabka ee kor u kacaya sanadka 2018.
Si loola socdo koritaanka, 68% jawaabeyaasha ayaa filaya inay kordhiyaan tiradooda madaxa ee lataliyayaasha safarka, kaliya 3% ayaa filaya hoos u dhac halka 29% aysan arkin wax isbadal ah. Sidii sannadkii 2017kii, caqabadda soo jiidashada iyo tababaridda hibo cusub ayay jawaab -bixiyeyaal badani ku tilmaameen inay tahay mid ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ee ganacsiyadoodu la kulmaan.
Inta badan shirkadaha maareynta socdaalka ee la daraaseeyay waxay ku tilmaameen xaalado dhaqaale oo togan inay horseedaan yididiiladooda. Iskudarka suuqa saamiyada ee sii kordhaya, shaqo la’aanta oo hooseysa, iyo rajada laga qabo in canshuurtu hoos u dhacdo ayaa keenaysa in macaamiishu kharash badan ku bixiyaan safarka raaxada. “Tirada safarka ayaa kordhay sababtuna waa dhaqaalaha Mareykanka oo xoog badan iyo dareenka lammaanaha iyo qoysaska doonaya inay wada joogaan, ayuu yiri Randy Yaroch, Milkiilaha iyo Maareeyaha Agaasimaha Socdaalka.
In kasta oo macaamiishu ay muujinayaan xoogaa taxaddar ah oo ku saabsan dhacdooyinka dhibta leh sida argagaxisada, masiibooyinka dabiiciga ah, iyo dhibaatooyinka caafimaadka, xasiloonidooda maaliyadeed waxay u muuqataa inay ka badan tahay walaac kasta. Stacy Weigant, oo ah Agaasimaha Qeybta Luxury Diamond for Forest Travel Miami ayaa tiri "Macaamiisha waxay wali rabaan inay safraan waxayna ogaadeen inay dhacdooyinku ka dhici karaan meel kasta oo adduunka ah - oo ay ku jiraan magaalooyinkooda. "Badankood uma oggolaanayaan inay tan joojiso."
Ka-qaybgalayaashii sahanka waxay sheegeen in macaamiishoodu ay ka fiirsanayaan meelaha qaarkood oo gaar ah, oo ay ku jirto Mexico, oo ay ka soo sheegaan rabshadaha la xiriira daroogada iyo khamriga wasakhaysan; Kariibiyaanka, halkaas oo duufaanadu khasaare u geysteen jasiiradaha qaarkood; iyo Paris, London, Turkey iyo meelo kale oo Yurub ah oo ay ku dhufteen argagixiso iyo qalalaase siyaasadeed. Taasi waxay tidhi, inta badan ka qaybgalayaasha sahanku waxay dareensan yihiin in walaacyada noocaas ahi ay horseedi karaan dadka socotada ah inay beddelaan qorshayaasha, laakiin aanay baajin. Scott Milne, oo ah Madaxweynaha Milne Travel American Express ayaa yidhi, "Waxay saamayn ku yeeshaan halka ay dadku u safraan, laakiin waxay umuuqdaan inaysan wax saamayn ah ku yeelan inay dadku safraan iyo in kale." Gail Grimmett, Madaxweynaha Hoggaamiyayaasha Safarada Luxury Brands, wuxuu ku raacsan yahay: "Dadku waxay aad uga fikiraan meelaha loo safro, halkii aysan safri lahayn."
Mar wax laga weydiiyay caqabadaha gaarka ah ee soo wajahay warshadaha, jawaab bixiyaasha ayaa sheegay in argagaxisada iyo dambiyada ay yihiin kuwa saameynta ugu badan leh, iyadoo saddex meelood hal meel ay ku sifeysay saameynta mid aad u sareysa (oo lagu qeexay inay ka weyn tahay 30% saamaynta ganacsigooda). Muhiimad aad u yar laakiin weli ahmiyad weyn leh waxay ahaayeen duufaanno iyo masiibooyin kale oo dabiici ah (17%), waxaa ku xigay welwel dhaqaale (15%). Boqolkiiba toban ayaa sheegay in fayraska Zika, oo weli saameeya inta badan Kariibiyaanka iyo Bartamaha iyo Koonfurta Ameerika, uu yeelanayo saameyn xooggan, xoogaa kor u kac ah sannadkii hore. In kasta oo Zika ay si gaar ah u dhibeyso dadka socotada ah ee qorsheynaya inay bilaabaan qoys, welwelku wuxuu sidoo kale saameyn ku yeelan karaa safarada jiilalka kala duwan.
Jawaab bixiyaasha ayaa filayay in cabsidaas oo kale ay horseedi doonto hoos u dhac ku yimaada Kariibiyaanka (73%) iyo Mexico (42%). Taasi waa tusaal aad u daciif ah marka loo eego sahankii sanadkii hore - markii kaliya 33% jawaabeyaasha ay arkeen hoos u dhac ku yimid ganacsiga Kariibiyaanka iyo Meksiko marka la isku daro — laga yaabee inay ka tarjumeyso qulqulka wararka xun ee labada gobol. "Kariibiyaanka ayaa hoos u dhacay duufaannada, laakiin waxay soo laaban doonaan marka hoteellada dib loo furo oo arrimuhu caadi ku soo noqdaan," ayay tiri Judy Stein, Isuduwaha Madaxweynaha Fasaxyada Ovation.
Dhinaca wanaagsan, jawaab -bixiyeyaashu waxay saadaaliyeen koror xoog leh oo dulsaarka Waqooyiga Ameerika (81%), Australia (75%), Koonfur -bari Aasiya (65%), iyo Yurub (65%). Dadka socotada ah ayaa doorta halka ay Yurub ka maraan, ayay sheegeen jawaabeyaasha. "Macaamiishu waxay u safrayaan Talyaaniga, Spain, Portugal, Scandinavia, iyo Iceland sababta oo ah waxaa loo arkaa inay ammaan yihiin," ayuu yiri Martin Rapp, Madaxweyne Ku -xigeenka Sare Leisure Travel ee Altour. "Paris waxay soo laabanaysaa kadib weerarkii argagixiso ee sanadkii hore."
Sahanka 2018 ayaa la weydiiyay saamaynta isbeddelka teknolojiyadda iyo carqaladaha kale ee warshadaha. Kalabar ayaa soo warisay in macaamiishu marmar ka codsadaan inay baaraan Airbnb, halfinestay, iyo meeleyn kale oo beddel u ah safarradooda. Xitaa in ka badan, 63%, waxay yiraahdaan waxay rumeysan yihiin in macaamiishu ay kaligood ballansadeen noocyada hoygaas.
Waxaa la weydiiyay caqabadaha teknolojiyadeed ee macaamiishoodu ay muujinayaan walaaca ugu badan, amniga internetka ayaa ahaa arrinta koowaad (60%), waxaa ku xigay khidmadaha isticmaalka xogta taleefanka gacanta marka dibedda (45%), helitaanka Wi-Fi ee duulimaadyada (43%) iyo qiimaha Wi-Fi ee huteelada (41%). Mid saddexaad ayaa sheegay in macaamiishoodu ay xiiseynayaan “sunta dhijitaalka ah,” ama ay ka nastaan ​​aaladooda.
Teknolojiyaddu sidoo kale waxay timid markii ka -qaybgalayaasha la weydiistay inay aqoonsadaan arrimaha muhiimka ah ee ay maanta kala kulmaan socodsiinta ganacsigooda. Kuwo badan ayaa xusay dhibaatooyinka la socoshada isbeddelada degdegga ah ee teknolojiyadda, gaar ahaan aaladaha GDS. Dhowr ayaa ka hadlay inay tahay inay macno u yeeshaan cufnaanta macluumaadka (iyo macluumaadka khaldan) ee internetka. Jack Ezon, Madaxweynaha Fasaxyada Ovation, wuxuu u arkaa inay tani fursad u tahay la -taliyayaasha safarka inay qiimo siiyaan macaamiisha, iyagoo "ka dhex -guuxaya buuqa ka imanaya dareenka guud iyo warbaahinta bulshada -waxna ka dhigaya aragti." Saamayn kale oo tiknoolajiyaddu leedahay ayaa ah in macaamiishu filayaan jawaabo degdeg ah 24/7. “Rajadu waxay tahay inaan isla markiiba ka jawaabno oo aan isla markiiba xaqiijinno,” ayay tiri Mary Ann Ramsey, oo ah Madaxweynaha Betty Maclean Travel, Inc.
Dhibaatooyinka ka jira warshadaha maareynta safarka waxaa uga sii daray waxa ay jawaab -bixiyeyaal badani u arkaan dhibka ku soo jiidaya kartida cusub shirkadooda iyo in si fiican loo tababaro. “In la sii wado helidda dhallinta ugu tayada wanaagsan si ay u soo galaan warshadan oo ay u tusaan inay noqon doonto xirfad abaal marin leh” waa arrin muhiim ah oo Linda Raymer, Madaxweynaha Qaybta Safarka Fasaxa ee Travelink, ay leedahay ganacsigeedu waajahayaa, oo ku celcelinaya dareenka dad badan jawaabeyaasha kale.
UNWTO waxay qabanqaabineysaa Shir Madaxeedka Dalxiiska Caalamiga ee Dalxiiska 1aad ee ...